Okuqukethwe kwephakheji: Uzothola i-1 Pet Nail Cut Set efaka i-1 Piece of Pet Nail Clipper nocezu lwefayela lezilwane ezifuywayo ezinosayizi omncane nohlaza okwesibhakabhaka, ezilungele ukusika isikhonkwane kanye nokugcina lokho kubushelelezi. Isethi ye-Pet Nail Trimmer Set ilungele ukusebenzisa, okungasindisa isikhathi sakho nemizamo.
Idizayini Entekenteke: I-Pet Nail Cut Kit yakhelwe ngesibambo se-wavy ukulingana nezandla zakho kalula, okungeyona-isiliphu, ukhululekile ukubamba futhi kube lula ukusebenzisa. Ngaphandle kwalokho, ukwakheka kwesibambo kungakugwema ukuhlubuka kwesandla kanye nesihlakala. Isethi yokusika yezilwane ezifuywayo ilungele izinja, izinyoni, amakati, onogwaja kanye nezingulube ze-Guinea, njll.
Kuphephile Ukusetshenziswa: Imiphetho yokusika esebenzayo ye-Nail Clipper ingasusa izipikili ezifuywayo ngokucacile nangokuphepha, okulula ukuyisebenzisa. Ngaphezu kwalokho, i-pet nail clipper ifakwe i-blade yokumisa ethambile engakugwema ukusika izipikili imfushane kakhulu noma ishesha kakhulu, futhi inganciphisa ubungozi bokulimaza izilwane ezifuywayo ngengozi ngesikhathi sokusika izipikili ngesikhathi sokusika izipikili ngesikhathi sokusika izipikili ngesikhathi sokusika izipikili ngesikhathi sokusika izipikili ngesikhathi sokusika izipikili ngesikhathi sokusika izipikili ngesikhathi sokusika izipikili ngesikhathi sokusika izipikili. Ngakho-ke ungazizwa ukhululekile ukusebenzisa imikhiqizo yethu.
Izinto zekhwalithi: isethi yokusika yezilwane yezilwane zasekhaya yenziwa ngensimbi ephezulu engagqwali.